"Casa de Agua" Cabaña Santuario, Boca del Cielo - I-Airbnb
I-Cabaña Santuario, ukuhlalisana okungenakunqotshwa kunye nendalo, kwelinye icala loLwandle lwePasifiki kunye nobukhulu bayo kwaye kwelinye icala umlambo wamanzi omhle kakhulu, oku kuzaliswa kabini ngosuku.
ECasa de Agua ungonwabela zombini iindawo ezingqongileyo, iCabaña Santuario enomthamo ukuya kuthi ga kwi-5 yabantu, ilungele iintsapho okanye iqela labahlobo abafuna ukonwabela kwaye baphile ngaphandle kwenkqubo yabo kwiparadesi yendalo.
Ikhabhinethi inendlu yangasese yangasese kwaye inokufikelela kwiinkonzo eziqhelekileyo
Ikhabhathi entle ejonge ulwandle kunye nechibi, ibanzi kakhulu kwaye inabo bonke ubutofotofo.
Inethafa elikhulu elinama-hammocks kunye nendawo yesidlo sakusasa ukusuka apho unokubuxabisa khona ubuhle boLwandlekazi lwePasifiki. Ikwanayo nethala elipholileyo elingasemva elinezitulo ezipholileyo, ezifanelekileyo ukuba nomzuzwana wokufunda KUNYE noxolo.
Ikhabhini ineebhedi ezintathu eziphindwe kabini zilungele isibini okanye usapho lwabantu aba-3 ukuya kwaba-6.
Ikhuselwe ngokupheleleyo ngesefu yeengcongconi ukuze ingabinazinambuzane kulo lonke elingaphakathi kwindlwana.
Inegumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nazo zonke izinto eziluncedo.
Ikhabhine ibekwe ngaphakathi "Casa de Agua"
Kulapho unako ukurenta ikhabhathi nganye ngokwahlukeneyo okanye nayo yonke ipropati.
“KwiCasa de agua” sinepalapa entle enemijelo ecaleni kwechibi (ichweba lomlambo) kunye nenye ipalapa kwicala leDel Mar, ngaloo ndlela sinethuba lokutshintsha imbonakalo-mhlaba, ubuhle beLagoon kunye neentaba eziyingqongileyo. , iingangamsha Pacific kunina, kokubini kunye iimbono paradisiacal.
Sinekhitshi eligcweleyo elineoveni yamatye enika ithuba lokubhaka isonka samagcisa kunye neepizza phakathi kwezinye izitya ezininzi ezimnandi.
Sinegumbi lokutyela eligqunyiweyo ecaleni kwekhitshi kunye netafile entle ende yesidlo sakusasa, sasemini okanye sangokuhlwa emthunzini wemithi yesundu.
Le ndawo intle yindawo encinci yeparadesi elinde wena ngakumbi!
Sinekhabhathi ezi-3 kwikhompleksi ezinokuqeshwa ngaxeshanye, kulapha eAirbb "Gcwalisa iNdlu yaManzi"
3 iibhedi ezilala abantu ababini, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1